George – बाह्रथरी कुरा
वरिष्ठ टिप्पणिकार : यिनी भलाद्मी पाराले टिप्पणि गर्न रुचाउछन । आफू वरिष्ठ (टिप्पणिकार) हुँ भन्ने यिनमा घमन्ड छैन तर बेलाबेला म पनि काँचो काठले जलिहाल्ने चाहिँ हैन है, जलाउने भए सुकेका दाउरामा शुद्ध घ्यु हाल भन्छन् यिनी। हाँसी हाँसी यिनले करौंती चलाउँछन् अनि लेखनमा पनि यीनको यो स्वभाव देखिन्छ। यिनले राजनीतिदेखि कुटनीति, बाख्रा पुराणदेखि रक्सी पुराणसम्म खररर भन्दिन्छन्।
तीज : १२थरी मन्थन
तिजको लहर आयो बरी लै….
हेर्नुस हरेक चाडवाड भन्ने बित्तिकै केहि परिचयात्मक गीत/संगीत र धुन हुन्छन् । जस्तो दशैंमा मालश्रीको धुन, तिहारमा देउसी भैलो, होलीको जोगिरा सरर अनि तिजमा माथि उल्लेखित गीत। हुन त अचेल बर्षभरीमा नेपाली सांगितिक क्षेत्रमा निस्किने गीत भन्दा तीजमा निस्किने गीतको संख्या बेसी हुन्छ, तैपनि करीब ३० बर्ष पैले यादव खरेलले कन्यादान फिलिममा समावेश गरेको यहि गीत नै तीजको “अथेन्टिक” गीत हुन पुगेको छ। भनिन्छ होली मनाएर मैजारो गरिने हिन्दु चाडवाडहरु साउने संक्रान्तिसँग फेरी सुरु हुन्छन्। साउन सुरु भएपछि त के छ र ? तीज पनि सुरु भै त गो !!! Continue Reading “तीज : १२थरी मन्थन” →
September 11, 2018 By George समाज तिज, पर्व, समाज
१२ सत्ताइस चेतावनी: यो लेख धेरै किताब नपढ्न र किताब पढ्नु रोग हो भन्ने प्रमाणित गर्न लेखिएको हो। तपाइँलाई पढ्नु र किताब मात्र संसार हो भन्ने लाग्छ भने ‘गेट आउट फ्रम हेयर।’ यति भनिसकेपछि पनि कथम् कदाचित यो लेख पुरै पढेर तपाइँले पढ्न छोड्नु भने त्यसको जिम्मेवार हामी हुने छैनौं। Continue Reading “पढाइ लेखाइ के काम, हलो जोत्यो खायो माम् !” →
April 13, 2018 By George बाह्र सत्ताईस कुरा, समाज, सामाजिक सञ्जाल किताब, किताबका कुरा, पढन्ते
अनुहार हँसिला मनमा कृष्णलीला
नमस्कार है मुखिया मुखिनीज्यूहरु ! चुनाव सकियो, रोपाइँ सकियो, नेपाली पोल्टिसमा खासै कुरा काट्न लायक कुरा पनि केही भैराको छैन; त्यसैले हामी पनि आफ्नो करिअर गोडमेल गर्दा गर्दै सुस्ताएछौं। तैपनि यो साउनमा कति नौलापौला जोडीका जोइहरु साउन बार्न माइत गाका होलान्, कति नत्थी लाका साँढेहरु बुढी तिजमा माइत जाने मौका कुरेर बसेका होलान्। तेसैले खडेरीले धाँजा फाटाका पाठकका मनमा हल्का रमाइलोले सिंचाइ गर्न यो बर्खे भेल छोप्ने जमर्को हामीले गरेका छौं ।
शिर्षक पढेरै कति जनाले जिब्रो काटिसक्नु भयो होला, यो १२ थरी पनि सस्तोमस्तो मसलादार पोस्ट हालेर पेजको भ्यू बढाउने चक्करमा लाग्यो भनेर। तेसो सोच्नुहुन्छ भने तपाईं गलत हुनुहुन्छ । हामीलाई यो पेजबाट केही कमाउनु पनि छैन, गुमाउनु पनि छैन। तेसैले सस्तो यौन बेच्ने छक्कापन्जामा हामीलाई लाग्नु पनि छैन। तर मनमा लाका कुरा लेख्नलाई नै यो ब्लग बनाइएको हो भने कसैसँग संकोच मान्न पर्ने बाध्यता हामीलाई छैन। धेरै भुमिका नबाँधि कन यो लेखको शिर्षकको औचित्य पुष्टि गर्नतिर लागौं ।
Continue Reading “अनुहार हँसिला मनमा कृष्णलीला” →
September 15, 2017 By George बाह्र सत्ताईस कुरा, समाज ढोंग, बिपरित लिङ्ग आकर्षण, यौन, शोच, समाजOne Comment
जम्ला हात गरें है हजुर ! परे त धनुष्टंकारै पनि पर्न सक्छु। चुनावको माहोल जो छ, भोट जो माग्नु छ । सुरुमा काठमाडौं अनि देश जो बनाउनुछ। हेर्नुस् मुलधारका मेडिया र हेभिवेट पत्रकारहरुले एक एक पार्टी बोक्या छन्। हामीले के महशुस गर्यौं भने जसको कोही छैन, उसको बाह्रथरी छ भन्ने बनाउनुछ। निर्धोले बोल्न सकेन भने त्यसको आवाज १२ थरी बनिदिनुपर्छ। परिवर्तनको संवाहक बनिदिनुपर्छ। हुनत यसअघि १२ थरीले कांग्रेस र एमालेलाई भोट मागेको पनि हो। तर हामी यसपालीको यो लेखमा अलि गम्भीर भएर साँच्चै नै राजधानीको हितको लागि र हामी सबैले गर्व गर्नसक्ने राजधानीको परिकल्पनाको लागि भोट मागिरहेका छौं। हुन पनि कस्तो परो भने बिबिसीमा काम गरेका घाघडन पत्रकार रविन्द्र मिश्रको साझा पार्टीको चर्चा सामाजिक संजालमै मात्र सिमित हुने हो कि भन्ने लागिरा’छ। त्यत्रो लाखौंको जागिर छाडेर देश बनाउँछु भनेर लागेका मान्छेको पार्टीले सुरुमै पानी समेत खान पाएनन् भने सबै नेपालीलाई गौहत्याको भन्दा बढ्ता पाप लाग्छ। त्योभन्दा पनि बढी काठमाडौं र ललितपुरका मेयर उपमेयरका उमेदवारको तुलनात्मक रुपमा अध्ययन गर्ने हो भने पनि साझा पार्टीका उमेदवार अग्रपंक्तिमा आउँछन्। आजको लेखमा हामी साझा पार्टीका उम्मेदवारलाई किन जिताउने भन्ने तर्कनामा केन्द्रित रहनेछौं। Continue Reading “नबनौं हनुमान, जिताऔं ‘गुड’ म्यान” →
May 7, 2017 By George बाह्र सत्ताईस कुरा, राजनिती, समाज उपमेयर, काठमाडौं, किशोर थापा, निरुपमा यादव, मेयर, रविन्द्र मिश्र, साझा पार्टी, स्थानीय निर्वाचन
१२ सत्ताइस् मतदाता
बैशाखको यो गर्मीले मौसम जति तताएको छ, त्योभन्दा बढी चुनावी सरगर्मी सुरु भैसकेको छ। उसो त चुनाव हुने नहुने/कैले हुने/कति चरणमा हुने भन्ने विवादको “बदली” नभैदेको भए ऐलेसम्म अर्कै रौनक थपिइसकेको हुन्त्यो, तर पनि येनतेन मुलुक चुनावतिर लतारिइ नै रहेको छ। सामाजिक सञ्जालमा त विभिन्न पार्टीका हनुमानहरुबीचमा तँ ठुलो कि म ठूलो हनुमान, तेरो लंका म ध्वस्त पार्दिन्छु भनेर पुच्छरमा आगो लाएर दौडिरहेको देख्न थालिसकियो। चुनावको चहलपहल शहर बजारमा भन्दा गाउँघरका चियापसलमा आको छ। टोल छिमेकका भित्ताभन्दा सामाजिक संजालका भित्ता रंगिन थालेका छन्। कुनै पत्रिकाले आफ्नो बारेमा लेखिदिएन भने पत्रकारलाई यसो दान दक्षीणा दिएर भएपनि उसको ब्लगमा आफ्नो बारेमा लेख्न लाएरै भए पनि उम्मेदवारले आत्मरति लिइरहेका छन्। यी चुनावका उमेदवारका कुरा अहिलेलाई चैं हनुमानहरुले नै गरुन्। हामी चाहिँ आउनुस् १२ सत्ताईस् मतदाताको बारे चर्चा गरौं। Continue Reading “१२ सत्ताइस् मतदाता” →
April 27, 2017 By George बाह्र सत्ताईस कुरा, राजनिती, समाज Nepal Votes, नेपाल, मतदाता, मतदान, स्थानीय निर्वाचन
फ्लाइ दुबईलाई धारेहात, तर आफ्ना आङ्का जुम्रा नि ?
यो हप्ता फ्लाई दुबईले नेपाली हवाइयात्रुमाथि गरेको भेदभावका बारेमा प्रकाशित ब्लगले धेरै नेपालीले हेपिएको महसुस गरे। एउटा एअरलाइन्सले एउटै जहाजमा लाग्दो पैसा तिरेर यात्रा गर्दा यात्रुको देशकै आधारमा भेदभाव गरिनु निश्चय पनि राम्रो हैन। यो सरासर हेपेको हो भन्नलाई कुनै आइतबार कुर्नुपर्दैन। तर यसै मेसोमा हामीले हाम्रा नियति, हाम्रा व्यवहार, हाम्रो देशको आर्थिकदेखि राजनैतिक हैसियत, हाम्रा आनिबानीका बारे पनि चर्चा गर्नु आवश्यक छ। अर्को एअरलाइन्सले भेदभाव गर्‍यो भनिरहँदा हाम्रो अध्यागमन, एअरपोर्ट, हाम्रो एअरपोर्टमा रहेका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मीका बारे पनि चर्चा गर्नुपर्ला। यो लेख १२ थरीको सँधैकोभन्दा फरक किसिमको पर्न गएमा १२ थरी परिवार माफी चाहान्छ 😋 Continue Reading “फ्लाइ दुबईलाई धारेहात, तर आफ्ना आङ्का जुम्रा नि ?” →
April 11, 2017 By George प्रविधि, बाह्र सत्ताईस कुरा, समाज flydubai, NAC, TIA, नेपाल, नेपाल एअरलाइन्स, नेपाली, फ्लाइ दुबई, यति एअर
जम्ला हात गरें है सा’ब सा’बनीहरु ! हुन त अस्ति भरखर आफ्नी प्रियतमालाई कसरी खुसी राख्ने भनेर हल्का टिप्स दिएकै हो। तर महिलाहरु के चाहन्छन् भन्ने नबुझेरै होला, सृष्टिकर्ता ब्रम्हाले समेत आफ्नो लागि एक जना माते खोज्न नसकेका। भनिन्छ नि स्त्री चरित्रम् दैवो नजानोती मनुस्य कुतम्।: धेरै माया गरो, किन यति विघ्न चाकडी गर्‍या छ यसले भनेर संका गर्न थाल्छन्, वास्ता नगर्‍यो तँलाई त मेरो मतलबै छै, उही रातको एकछिनको रमझमको लागि चाहिने त हो नि भनेर ताना मार्न थाल्छन्। जति नै कर्म गरे पनि फल नफल्ने ठाम परो यो आइमाइलाई खुसी राख्ने भन्ने कुरो। अब यस्ता अप्ठ्यारो ठाममा आएका पिलो जस्ता गलफ्रेन/जीवनसंगिनी रिसाइहाले भने के गर्नि वा के नगर्नी भनेर हाम्रो पारिवारिक बीटका सदस्यहरुको घनिभुत छलफलबाट हामीले केहि रणनीतिहरु सार्वजनिक गर्दैछौं। Continue Reading “निर जैले रिसाउनीssssss” →
February 14, 2017 By George बाह्र सत्ताईस कुरा
छैन दशैं… किन दशैं जस्तो !!
हुन त केहीपहिले हामीले ‘उ बेलाको दशैं’ आशयको एक लेख पस्किसकेका हौं, तर १५-१५ दिनसम्म चल्ने दशैं एउटै लेखले त के झारा टार्नु भनेर यो फलोअप लेख्ने जमर्को गरेका छौं। फुत्केको माछो ठूलो, मरेको छोरो जर्नेल वा पहिलेकै स्वास्नी राम्री भने जस्तै मान्छेलाई पनि पहिलेकै कुरा राम्रा लाग्नु स्वभाविक मान्छौं हामी । तर के गर्नु यो मर्त्यलोकमा जन्म लिएसी मानिस समयकै दास हुन पर्ने ! न सुखको क्षण बिस्तारै बितोस् भनेर समय रोकिन्छ, न दु:खको क्षण छिटो कटोस् भन्दैमा समय दौडिन्छ। त्यसैले त ‘उ दिन गए, यी दिन आए, म्वाइँ खाने ठाममा झुस् पलाए’ भन्ने उक्तिको प्रादुर्भाव भयो।
सबै ज्ञात अज्ञात पाठकहरुलाई थाहा छ, १२ थरी भनेको हावा पोस्ट हो। तर पनि सधैँ हावाहुरी बनेर पात पतिङ्गर मात्र कति उँडाउनु भनेर १२ थरीले यसपाली अर्थराजनीतिक लेख लेख्ने जमर्को गरेको छ। नेपालमा विज्ञ बन्न के आइतबार छ र ? एक दुइ (कु?)तर्क दिएर मेडियामा अन्तर्वार्ता दिएसी भैहालियो स्वनामधन्य विज्ञ। आउनुस् हाम्रो दशैं पहिले भन्दा किन (बे)रसिलो र फरक बन्दै गैरहेको छ भन्नेमा यसो डेढअक्कल लाएर बिश्लेषक बनि टोपलौं। Continue Reading “छैन दशैं… किन दशैं जस्तो !!” →
October 9, 2016 By George बाह्र सत्ताईस कुरा
हुन त यतिबेला बाल्यकालमा रहेका भाइबहिनीहरुलाई आजको १५-२० बर्षपछि अहिलेकै दशैं आकर्षक लाग्न सक्ला, तर ५० को दशकमा SLC दिएका (अब हेर्नुस्, नेपालमा सिस्टमै कस्तो बस्यो भने को सिनियर वा जुनियर, कसको कपाल कति छिप्पेको, कुन मुलामा कति काठ पसेको भन्ने मापक नै नेपालमा कसले कति सालमा SLC दिएको भन्ने बाट हुन्छ) त्यसैले हामी आफ्नो बाल्य वा किशोराबस्थाको दशैंका केहि सम्झना कोट्याएर नोस्टाल्जिक हुन चाहन्छौं। आउनुस् टाइम मेसिनमा बसेर सँगै यात्रा गरौं बाल्यकालको दशैँमा। Continue Reading “आयो दशैं ढोल बजाइ …!!!” →
September 29, 2016 By George बाह्र सत्ताईस कुराOne Comment
आउनुस लप गर्न वा बिहेको कुरो चल्दा केटीहरूले केटामा खोज्ने केही गुणहरूको चर्चा गरौँ । Continue Reading “बिहे गर्दा केटामा खोजिने गुणहरु” →
August 9, 2016 By George बाह्र सत्ताईस कुराOne Comment